भारतसँगका असमझदारी हटेका छन् : केपी ओली [अन्तर्वार्ता] « AayoMail
भारतसँगका असमझदारी हटेका छन् : केपी ओली [अन्तर्वार्ता]
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँगको असमझदारी हटेको बताएका छन्। बिबिसी हिन्दीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले विगतका अँध्यारोपक्षमा नअल्झिई अब सकारात्मक कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले छिमेकी मुलुकबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै भारतले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए। प्रस्तुत छ ओलीसँगको अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद-
यो महामारीमा नेपालले धेरै कठिन क्षण भोग्यो। के अपेक्षा गरेअनुसार नै भारतबाट सहयोग प्राप्त भएको छ?
उसो त मलाई नकारात्मक कुरा गर्नु छैन। भारत आफैं समस्यामा छ। नेपाल र भारतको सम्बन्ध यसरी जोडिएको छ कि, यदि भारतमा नियन्त्रणमा (कोरोना) आयो तर नेपालमा आएन भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। सीमा बन्द गरे पनि फैलिहाल्छ। किनकि सीमाका बासिन्दाहरु यति निकट छन् कि उनीहरु साथमै रहन्छन। हामीहरु उनीहरुलाई रोकेर पनि रोक्न सक्दैनौं।
प्रधानमन्त्री मोदीलाई तपाईंको के सन्देश छ?
नेपाल भारतका लागि तेस्रो मुलुकभन्दा अलग छ। किनकि हामी छिमेकी हौंं। हामीहरुबीच सीमा पनि खुला छ। यदि हामीबीच हिमाल हुन्थे भने सीमा खुला भए पनि आवतजावत कठिन हुन्थ्यो। तर यस्तो छ कि उता पनि खेत छ, यता पनि खेत। कतै–कतै त दशगजा कहाँ छ भन्नेसमेत थाहा छैन। यता घर छ, उता पनि घर। हरेक चिजका लागि आवतजावत हुन्छ । यसैले यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै र मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै भारतले पूर्ण रुपले सहयोग गर्नुपर्छ।
मैले भनिरहेको छैन कि भारतले सहयोग गरिरहेको छैन। हामी लिक्विड अक्सिजन, औषधि भारतबाट ल्याइरहेका छौं र भारतले सहयोग गरिरहेको छ।
तर भारतले अझ बढी गर्न सक्थ्यो?
म धन्यवाद दिन्छु भारतले सबैभन्दा पहिला खोप पनि उपलब्ध गरायो।
चीनको प्रभाव नेपालमा बढी छ अहिले ? किनकि चीनले बढी सहयोग गरिरहेको छ महामारीका दौरान।
यसमा राजनीतिलाई बीचमा ल्याउनु जरुरी छैन। यसमा कसैको प्रभावको कुरा छैन । भारतले खोप दिन्छ ठीक छ, चीनले दिन्छ ठीक छ। इयु, युएसए, युके जसले दिन्छन् ठीक छ। यो खोपको कुरा हो, राजनीतिको कुरा होइन। यसैले यसबारे राजनीतिक गर्नु ठीक होइन। दुवै छिमेकीलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौं। किनकि एउटाले १८ लाख र एकले २० लाख डोज दियो। दुवैको सहयोग पाइरहेका छौं। दुवैले मेडिकल उपकरण दिइरहेका छन्। यसैले हामी दुवैलाई धन्यवाद दिन्छौं।
एक अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु। ६ वर्षदेखि मोदी पावरमा छन्। नेपालसँगको सम्बन्धमा केही मनमुटाव आयो, केही तनाव आयो। यो ६ वर्षको सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ?
छिमेकसँग नै समस्या हुन्छ। चिली, अर्जेन्टिनाको सेनासँग न प्रेम, न घृणा। यद्यपि फेसबुकको जमानामा यताउता हुन्छ। तर निकै थोरैमात्र चान्स हुन्छ। उता जानु पनि छैन, उताबाट यता आउनु पनि छैन। न प्रेम, न घृणाको सम्बन्ध हुन्छ । जब छिमेक हुन्छ, त्यहाँ प्रेम र समस्या पैदा भइरहन्छ ।
के प्रेम, समस्या… ??
कहिलेकाही असमझदारी थिए। कहिलेकाहीँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पैदा भएका थिए। अब मिसअण्डरस्ट्याण्डिङ, असमझदारी हटेका छन्। यसैले एक समय असझदारी थिए, त्यसैमा अल्झिरहनु हुन्न। हामी भविष्यलाई हेरौं र अगाडि बढौं। हामीमा कतै अँध्यारो पक्ष छ भने त्यसमा अल्झिरहनु हुन्न। हामीले उज्यालो पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ,